Cagaarka digirta leh ee basasha Sauteed iyo casriga ah ee Za'atar Breadcrumbs
Cuntada American Cunnooyinka qudaarta Bariga Bariga Dhexe Cagaarka qudaarta Dareemaha Beerka Beerka
Digirta cagaaran, digirta cagaaran, waxay ku badan yihiin cuntooyinka Bariga Dhexe. Waxay caadi ahaan la kariyaa oo ay la socdaan hilibka hilibka lo'da iyo waa qudaar si caadi ah loo cuno. Koritaanka, digirta ayaa loo adeegay in ka badan inta uu le'eg yahay khudradda kale ee kale. Laakiin ugu yaraan waxay ahayd mid dhadhan fiican leh, taas oo ah wax badan oo loo sheegi karo cawliga, kafateeriyada dugsiga ee kafateeriyada.
Fure u ah digirta dhadhanka wanaagsan ayaa ah in ay helaan iyaga oo kaliya qiyaasta saxda ah ee ku-deeqidda. Ma aha mid aad u culus (haddii aadan adigu sidan u jecelyahay), laakiin hubaal maaha mid aad u jilicsan. Haddii aad rabto in aad si fudud u ilaaliso oo aad uhesho midabkooda midabka dhalaalaya, qarsoodi waa inuu kobciyo dhowr daqiiqo oo kaliya kadibna ku boodo biyaha barafka si uu u joojiyo karinta iyo u dhigo midabka. Laakiin waxaan jecelnahay kaneecadeena in ka badan sidan oo kale sidaa daraadeed qaar ka mid ah midabka dhalaalaya lumay. Weli, waxaan dooneynaa cagaaran, ma cawlaan!
Sida dhadhanka, waxaan leenahay cantoobo wax lagu dubo roodhida, lakiin midka aan inta badan sameyno waa noocan oo kale leh basasha qoraalka ah. Dhab ahaan, wax kastoo dhadhan fiican ayuu dhadhamiyaa. Iyo digirta waxay noqon laheyd mid la mid ah tan oo kale haddii aan u adeego iyaga oo raacaya qaar ka mid ah dhadhanka cad. Isku day inaad ku darsatid xayawaanka xayawaanka ah.
Tan iyo tan digirta aan lagu dubin suugo, sida macaan iyo jiis, brown xayndaabka xayawaanka ee digsi isku mid ah oo loo isticmaalo in lagu qoro basasha. Ku darida za'atar in ay isku daraan waxay ku darayaan dhadhan cajiib ah iyo caraf udgoon iyo runtii kor u qaadaya saxan.
1 lb. digirta cagaaran
4 tbsp. saliid saytuun (qaybin)
1 basal (diiray oo jarjaran)
3 tbsp. xaruunta cuntada (
Panko waa mid fiican)
Salt iyo basbaas ay u dhadhamiyaan
Isku jar dhamaan dariiqyada cagaaran iyo ku dar digsi biyo ah. Ku kari kuleylka sarreeya qiyaastii 10 daqiiqo ama ilaa digirta yihiin fargeeto foosto. Daadi.
Inkastoo digirta ay cunto karayaan, ku dar 2 qaado oo saliid saytuun ah si aad uhesho ama digsi digsi leh oo la raaco basasha diirran oo la jarjaray. Saute ilaa 10 daqiiqo ilaa basasha si khafiif ah loo karameliyey.
Marka basasha la sameeyo, ka saar digsiga oo ku dar digirta cagaaran ee la kariyey. Waxaad ku dartaa 2 qaado oo saliidda sayniska ah ee digsiga iyo weelka xashiishka iyo za'atar. Saute ilaa 2 daqiiqo, kareyso inta badan, illaa khafiif ah.
Toss digirta cagaaran iyo basasha leh haraaga xayawaanka iyo xilli milix iyo basbaas ay u dhadhamiyaan.
Fatuurad la ruxay 2 g
Carbohydrateska 35 g
Fiber diirran 12 g
Romaaniyaanka roodhida ah iyo roodhida baradho
Dhirta-Fallet Filet Mignon
Root Suugo Khafiif ah
Miisaaniyad Cunto ah oo la dubay Quruxda Cuntada
Pinto Beanska iyo Sigaarka Sigaarka leh Bariiska
Crockpot ugu yar ee hilibka doofaarka
Cabbirta Cas ee Cagaarka leh Cajada Caanaha
Hallullas - Chilean "Buskud"
Czech Poppy Seed Caanaha Caano (Kolace) Cuntada buuxinta
Baro dhadhanka, dhadhanka kulaylka ee xayeysiinta rigooriga ah
Noocyada kala duwan ee heerkulbeega cuntada iyo isticmaalka
Lemon Salad iyo Delicious Lemon Recipe Recipe
Aragti guud ee Cuntada Deegaanka ee Oregon
Spinach iyo Feta Hummus
Sidee loo kariyaa Ham
Yakisoba: Japan Baasto Baasto leh Hilib doofaar iyo Khudaar
Brining Digaagga Digaagga
Talooyinka Barafka & Barafka
Cajiibka Cadaanka Cadaanka Cadaanka Candy Candy
Ugu sareeya 8 Cunnooyinka Raashinka Cuntada Giriigga
Sahaminta Cuntada Giriigga